Kushandisa Bhuku Rinonzi “Imbira Jehovha Uchifara” | JW.ORG
Tsvaga Bhuku Rauri Kuda
Tsvaga Nyaya Kana Kuti Vhidhiyo paJW.ORG
Kana Uchida Kuchinja Mutauro
Ona Zviri paJW.ORG Mune Mumwe Mutauro
Kushandisa JW.ORG Pafoni Kana paTablet
Shandisa Study Bible (Bhaibheri Rekudzidza)
Shandisa Bhaibheri Rekudzidza Riri paJW.ORG​—Manotsi Uye Mapikicha Nemavhidhiyo
Tumira Link yeNyaya, yeVhidhiyo, Kana Kuti yeBhuku
Shandisa Bhuku Rinonzi “Imbira Jehovha Uchifara”
Shandisa Bhuku Rinonzi “Imbira Jehovha Uchifara” Riri paJW.ORG
Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa​—JW.ORG
Teerera mimhanzi uye ona mashoko enziyo mubhuku redu renziyo.
Dhaunirodha Bhuku Renziyo
Ridza Kana Kudhaunirodha Mimhanzi
Tsvaga, Ridza, Uye Ona Nziyo Dzacho
Ona Mashoko Erwiyo
Enda pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MIMHANZI.
Baya bhatani iri kuti ukwanise kusarudza zvaunenge uchida kudhaunirodha.
Bhokisi iri rinoratidza mhando dzese dzemafaira ebhuku rinonzi “Imbira Jehovha Uchifara.”
Baya bhatani iri mubhuku renziyo kuti uone mhando dzefaira raunenge uchida kudhaunirodha. Semuenzaniso baya pakanzi “PDF” kuti uone maPDF aunogona kudhaunirodha.
Baya bhatani iri rinenge riri padivi pemusoro webhuku rauri kuda kudhaunirodha. Bhatani iroro rinenge richiratidza kuti faira racho rakakura zvakadini.
Kana paine mimhanzi yenziyo dzacho mumutauro wako, mimhanzi yacho pamwe chete nebhuku racho nenziyo zvinowanika pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MIMHANZI.
Baya bhatani iri rinenge riri pane bhuku racho kuti ukwanise kuridza kana kuti kuridhaunirodha.
Bhokisi riri pasi apa rinoita kuti ukwanise kuridza nziyo.
Baya Play ari nechekumusoro mubhokisi iri kuti uridze nziyo dzacho dzese kubva padzinotangira.
Baya Play parwiyo rwaunenge uchida kuridza.
Nziyo dzacho dzinorira dzichitevedzana kusvika dzese dzapera.
Mubhokisi riri pamusoro apa unokwanisa kudhaunirodha nziyo dzese kana kuti rwiyo rwumwe chete.
Baya pakanzi ZIP kuti udhaunirodhe mimhanzi yebhuku rese renziyo. Makuriro akaita faira iri rinenge riine nziyo dzese anenge achiratidzwa ipapo.
Baya pakanzi MP3 kuti udhaunirodhe mumhanzi. Makuriro akaita faira racho anenge achiratidzwa ipapo.
Kuti uvhure bhuku rinonzi “Imbira Jehovha Uchifara,” baya bhuku racho kana kuti baya musoro webhuku racho.
Apa unowana nziyo dzaunenge uchida kuteerera kana kuti kuona.
Maka pakanzi Play continuously (Ramba Uchiridza) kuti uridze nziyo dzacho dzese. Mimhanzi inozotomira kurira kana yese yapera.
Maka pakanzi Shuffle kana uchida kuti nziyo dzacho dzirire dzisingatevedzani. Mimhanzi inozotomira kurira kana yese yapera.
Shandisa mabhatani ari pasi apa kuti uite zvaunoda paunenge uchiridza mimhanzi:
Baya Play kuti utange kuridza nziyo kubva kwekutanga. Kana kuti baya Play parwiyo rwaunenge uchida kuridza.
Baya Pause kuti rwiyo rwumire kurira. Baya Play zvekare kuti rwiyo rwuenderere mberi.
Fambisa kadenderedzwa aka uchienda kumberi kana kumashure kuti usvike pauri kuda kunzwa murwiyo rwacho.
Kana wakamaka pakanzi Play continuously (Ramba uchiridza) kana kuti Shuffle, baya bhatani iri kuti udzoke parwiyo rwuri kumashure.
Kana wakamaka pakanzi Play continuously (Ramba uchiridza) kana kuti Shuffle, baya bhatani iri kuti uende parwiyo rwuri kumberi.
Baya kabhatani aka kana uchida kuti mumhanzi umbonyarara. Maminitsi erwiyo anenge achifamba asi usinganzwi kurirwa kwarwo.
Baya zvekare kabhatani aka kuti rwiyo rwacho rwutange kunzwika.
Paunenge uchiridza mimhanzi, mabhatani ese ari pamusoro apa unogona kuashandisa paunenge uchidzika kana kukwidza nepeji iyi yemimhanzi. Saka unogona kumbomisa mimhanzi kana kurwuridza asi usingarasiki paunenge uri papeji yacho.
Pane nzira mbiri dzekuona mashoko emubhuku rinonzi “Imbira Jehovha Uchifara.” Unogona kuita kuti abude achidzika kana kuti achienda kurudyi.
Baya bhatani iri kuti nhamba yerwiyo nemusoro werwiyo rwacho zvibude zvichidzika. Aya ndomabudiro anoita nziyo paunotanga kudzivhura.
Baya Play kuti uridze rwiyo rwaunoda, kana kuti baya musoro werwiyo rwacho kuti uone mashoko arwo.
Baya bhatani iri kuti uone nhamba dzenziyo chete. Baya nhamba yerwiyo kuti uone mashoko erwiyo rwacho.
Kana mashoko erwiyo aripo paindaneti, baya nhamba kana musoro werwiyo kuti uone mashoko acho.
Kuti utsvage rwiyo, baya kabhokisi kari padivi pebhatani iri.
Baya kaarrow karipo kuti uone nhamba nemisoro yenziyo.
Nyora nhamba yerwiyo kana mamwe mashoko emusoro werwiyo rwacho.
Baya rwiyo rwaunoda kuti uone mashoko acho.
Sarudza kuti unoda kuti mashoko acho abude sei:
Bhatani iri rinoita kuti mashoko erwiyo abude nenzira yekuti Magwaro anenge arimo anovhurika paunoabaya. Aya ndiwo mabudiro anoita nziyo paunotanga kudzivhura. Paunenge uchiridza rwiyo, mashoko erwiyo rwacho anenge achihairaitwa achienderana nemumhanzi.
Bhatani iri rinoita kuti mashoko erwiyo abude sepikicha. Nzira iyi inoita kuti uone manotsi erwiyo rwacho. Kana wangobaya pikicha, unogona kuikudza kana kuiita diki, uye kana foni kana tablet yako iine touch screen, unogona kushandisa minwe yako pakuita izvi.